Munaasabad lagu dhaarinayay Taliyeyaasha cusub oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyada – idalenews.com
Munaasabad lagu dhaarinayay Taliyeyaasha cusub oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu dharinayay Taliyayaasha cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka.
“Waxaa sharaf ii ah maanta in aan idin baro oo aan idinku soo dhaweeyo Taliyayaasha cusub ee Ciidamada Xoogga Dalka General Dahir Adan Cilmi iyo Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka General Cabdirisaaq Khaliif Cilmi.”
“Ugu horeyn waxaan rabaa in aan u mahadcelino aniga iyo shacabka Soomaaliyeed General Cabdiqaadir Cali Diini iyo General Cabdikariin Yuusuf Dhagabadan, oo Ciidanka Xoogga Dalka si sharaf iyo geesinimo leh u soo hogaamiyay sanadadii lasoo dhaafay.”
“Guulo aad u waaweyn ayey gaarsiiyeen Ciidamada Xooga Dalka. Guulahaas oo ka dhacay goboladda dalka ayagoo kaashanaya Ciidanka AMISOM. Sidoo kale waxey aasaas u sameeyeen ciidan qaran, tababar fiican leh, akhlaaq ka siman, oo ka kala yimid Goboladda dalka.”
“Shaqadooda badan iyo go’aankooda adag ayaa keentay horumarka ciidamadeena. Taasna umadda Soomaaliyeed wey uga mahad celineysaa, taarikhduna baal dahab ah ayey ku qoreysaa.”
“Mustaqbalka Xooga Dalka waa guul. Waxaana u mahad celinayaa saaxiibadeen Beesha Caalamka. Sidoo kale cunaqabateyntii hubka waa laga qaaday Soomaaliya. Waxaa loo baahanyahay masuuliyad. Waana waajib Qaran oo idin saaran. Waxaa mudan in la xuso in cuna qabateynta dib loo soo celin karo.” Sidaas darteed waa in aad waajibkiina gudataan oo masulliyad iska saartaan.”
“Waxaan soo dhaweynayaa General Daahir Adan Cilmi Taliyaha Cusub ee Ciidamada Xooga Dalka iyo General Cabdirisaaq Khaliif Cilmi Abaanduulaha Cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka, Waxaana ku wargeliyay General Dahir inuu horay usii wado horumarinta Ciidanka iyo dib-u habeyntiisa. Amniga dalka ee guud ayaa aasaas u ah Horumar, Maamul wanaag, Shaqo abuuris, iyo dhamaan howlaha uu shacbkeena u baahan yahay.”
“Ciidamedeena amniga ayaa wax walba jawaab u ah. Ciidamedeenu waa inay si fiican u tababaran yihiin, Waa inay hantaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. “Waxaan idiinkaga mahadcelinayaa sida geesinimada ay ku dheehnayd ee aad cadowga isaga muquuniseen sanadihii ina soo dhaafay, Waxaan kaloo idiinkaga Mahadcelinayaa guulaha aad ka gaarteen weeraradii aad qaadeen iyo sida ay idiinkaga go’nayd inaad mustaqbal fiican gaarsiisaan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.”
“Dowladda Soomaaliya waxey u balan qaadeysaa Ciidamada Xoogga Dalka in ay hiil iyo hoo la garab taagan-tahay. Caruurtiina iyo reerkiina waa la daryeelayaa”
Sacuudiga oo noqday dalka ugu shilka badan Aduunka, iyadoo 20-kii sano ay ku dhinteen 86,000 oo ruux
Weerar bambaano oo xalay lagu qaaday hoyga Gudoomiyaha degmada Waabari